Mitombo ny fitandremana noho ny fampihorohoroana: namoaka ny torohevitra momba ny dia ho an'i Tonizia i Etazonia
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Mitombo ny fitandremana noho ny fampihorohoroana: namoaka ny torohevitra momba ny dia ho an'i Tonizia i Etazonia
Ny departemantam-panjakana amerikana dia namoaka ny toro-hevitra momba ny dia an-tany haavo 2 (fanatanjahantena mitombo) ho an'i Tonizia. Navoaka izany fampitandremana izany noho ny fitomboan'ny risika amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro amin'ireo lasibatra vahiny sy anatiny ao amin'ny firenena. Ny fanafihana mpampihorohoro dia nikendry ny governemanta Toniziana taloha sy ny mpitandro ny filaminana ary ireo toerana fizahan-tany malaza.
Nanoro hevitra ireo teratany amerikana mandeha any Tonizia:
Nampitombo ny fahamalinana ny fampihetseham-batana any Tonizia noho ny fampihorohoroana. Ny faritra sasany dia nitombo ny risika.
• Ao anatin'ny 30 km atsimo atsinanan'i Tonizia manaraka ny sisintanin'i Libya noho ny fampihorohoroana.
• Faritra be tendrombohitra any amin'ny faritra andrefan'ny firenena, ao anatin'izany ny faritra Chaambi Mountain National Park, noho ny asa fampihorohoroana.
• Ilay efitra atsimon'i Remada noho ny faritra miaramila.
• Jendouba atsimon'i Ain Drahem sy andrefan'ny RN15, El Kef, ary Kasserine, eo akaikin'ny sisin-tany Alzeriana noho ny fampihorohoroana.
• Sidi Bou Zid ao afovoan'i Tonizia noho ny fampihorohoroana.
Ireo vondrona mpampihorohoro dia manohy mikononkonona fanafihana mety hatao ao Tonizia. Mety hanafika tsy misy fampandrenesana kely na tsy misy fampandrenesana ny mpampihorohoro, kendrena ny toerana fizahan-tany, tobim-pitaterana, tranombakoka, trano fandraisam-bahiny, hotely, fety, trano fandihizana, trano fisakafoanana, tranom-pinoana, tsena / toeram-pivarotana, fotodrafitrasan'ny governemanta ary hery fiarovana. Ny fanjakana maika any amin'ny firenena, izay manome hery fiarovana bebe kokoa hitandrovana ny filaminam-bahoaka ary ahafahan'ny governemanta mifantoka amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana, dia manan-kery.
Ny governemanta amerikana dia voafetra ny fahafahany manome serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana amin'ny faritra sasany ao Tonizia. Ny mpiasan'ny governemanta amerikana dia tsy maintsy mahazo alalana manokana handeha ivelan'ny Tunis lehibe.
Raha manapa-kevitra ny handeha ho any Tonizia ianao:
• Mitandrema rehefa mampiasa fitateram-bahoaka, noho ny olana ara-piarovana sy fiarovana.
• Aza manao fihetsiketsehana sy vahoaka.
• Araho maso ny haino aman-jery eo an-toerana raha misy ny hetsika vaky trano ary mivonona amin'ny fanitsiana ny drafitrao.
• Mitandrema amin'ny mety hisian'ny fakana an-keriny.
• Aza mijanona mandritra ny alina any ivelan'ny tanàna lehibe sy ny toerana fizahan-tany.
• Makà fiantohana ara-pitsaboana feno izay misy famindran-toerana ara-pitsaboana.
• Midira amin'ny programa Smart Travel Enrollment Program (STEP) handraisana Fanairana ary hanamora ny fitadiavana anao amin'ny toe-javatra maika.
• Araho ny Departemantam-panjakana ao amin'ny Facebook sy Twitter.
• Avereno jerena ny tatitra momba ny heloka bevava sy ny fiarovana an'i Tonizia.
• Ny olom-pirenena amerikana izay mivezivezy any ivelany dia tokony hanana drafitra tsy ampoizina amin'ny toe-javatra vonjy maika. Avereno jerena ny lisitry ny lisitry ny mpitsangatsangana.
Sisintany miaraka amin'i Libya
Ny fampandrosoana any Libya dia manohy miantraika amin'ny toe-java-misy fandriam-pahalemana manaraka ny sisintanin'i Tonizia-Libiana amin'ireo faritra toa an'i Ras Jedir sy Dehiba miaraka amin'ireo tanànan'ny Ben Guerdan sy Medenine. Ny sisintany miaraka amin'i Libya dia mihidy matetika amin'ny fivezivezena rehetra ary misy fampandrenesana fohy mandritra ny fotoana maharitra. Manoro hevitra ny olom-pirenena amerikana ny Departemantam-panjakana mba tsy handeha any Libya.
Tendrombohitra Andrefana sy valan-javaboary Mountain Chaambi
Ireo vondrona mpampihorohoro dia mitohy miasa amin'ny tendrombohitra any Tonizia Andrefana.
Ilay Efitra atsimon'i Remada
Ny tany efitra atsimon'i Remada dia notendren'ny Governemanta Tonizia ho faritra miaramila. Ilaina ny fahazoan-dàlana manokana ho an'ireo mpandeha maniry hiditra amin'ny faritra miaramila.
Jendouba El Kef sy Kasserine akaikin'ny sisintany Alzeriana
Ireo vondrona mpampihorohoro dia manohy miasa amin'ireo faritra ireo.
Sidi Bou Zid any Tonizia afovoany
Ireo vondrona mpampihorohoro dia manohy miasa ao amin'ity faritra ity.
Te ho ela velona ve? Makà fialan-tsasatra voajanahary